Homeस्वास्थ्यजनस्तरबाट रकम उठाएर डडेलधुरामा पीसीआर मेसिन
काठमाडौं । जनस्तरबाट रकम संकलन गरेर डडेलधुरामा जिल्ला अस्पतालमा जडान गरिएको पीसीआर मेसिनबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण सुरु भएको छ ।
बिहीबार राति र शुक्रबार विहान दुई लट नमुना परीक्षण गरिएको ल्याबका इन्चार्ज ईश्वरी भुसालले बताए । उनका अनुसार ल्याब सञ्चालनका लागि सेती अस्पताल, धनगढीबाट रमेश शाही र जिल्ला अस्पताल, बझाङबाट नरेश खड्का पनि आएका छन् । ‘अस्पतालले काठमाडौंबाट तीन जना बोलाएको छ, उहाँहरुलाई पनि ट्रेन गरेर आवश्यक अनुसार परीक्षण गर्छौं’ भुसालले भने ।
यसअघि प्रदेश ७ मा धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र पीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा संकलन गरिएको नमुना धनगढी ल्याउन पनि घण्टौं लाग्ने र समयमा रिपोर्ट नआउने भएपछि डडेलधुरामै पीसीआर मेसिन जडान गर्न जनस्तरबाट रकम संकलन सुरु भयो ।
विदेशमा रहेका सुदूरपश्चिमबासीहरुको सस्था सुदूरपश्चिम समाजमा आवद्ध मानिसहरुले सहयोग गरे, अरुले पनि रकम दिए । नेपालमा पनि उद्यमी, खेलाडी, कलाकार लगायतले सहयोग गरे । छोटो समयमा नै ७४ लाख १५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको ह्युमनिटी फाउण्डेसनका अध्यक्ष अमरबहादुर शाहीले बताए ।
शुक्रबार मात्र ८ लाख १३ हजार ६६५ रुपैयाँको चेक फाउण्डेसनका अध्यक्ष शाहीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘सहयोगका लागि आएको प्रतिवद्धता समेत गर्दा १ करोड २० लाख हुन्छ’ भन्छन्,‘कोरोना महाकारीका कारण अहिले हामी सबै समस्यामा छौं । तर सही सोच भयो भने यस्तो बेलामा पनि सहयोग जुट्ने रहेछ ।’
यही रकमबाट ९६ लाख रुपैयाँमा पीसीआर मेसिनसहित कोरोना परीक्षणका लागि चाहिने सामाग्री खरिद गरिएको छ ।
अभियान्ताहरुले जनस्तरबाट उठेको सहयोग रकमको सही सदुपयोग गर्ने बाचा समेत गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका सात जिल्लाका लागि पायक पर्ने भएकाले पीसीआर मेसिन जडानका लागि डडेलधुरा अस्पताल छनोट गरिएको अभियानमा संलग्न तेक्वान्दो खेलाडी दीपक विष्टले बताए ।
डडेलधुरा अस्पतालको ल्याब इन्चार्ज भुसालका अनुसार यो मेसिनमा एक पटकमा बढीमा ९६ वटा नमुना परीक्षण गर्न मिल्छ । भीटीएमको अभाव छैन भने परीक्षणका लागि चाहिने आरएनए एक्ट्र्याक्सन र पीसीआर किट भने सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सेती अस्पतालमा पठाएको मध्ये ५०० वटा ल्याइएको छ ।
जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नमुना संकलन गर्ने गरिएको छ ।-अनलाइन खबर
अब कहिल्यै फर्केर आउने छैनन् सबैकी प्यारी कञ्चन!
buy tadalafil online – tadalafil generic tadalafil pill
propecia testosterone levels – does propecia work finasteride and tamsulosin
propecia hair regrowth – http://propechl.com/ finasteride
buy propecia – propecia drug what does finasteride do
buy cialis toronto cialis 5mg tablet monthly cost of cialis without insurance
vardenafil reviews – vardenafil vs viagra wiki vardenafil generic
prescription medicine valtrex purchase valtrex – buy generic valtrex online canada
does plaquenil are hydroxyzine and plaquenil the same thing how long after taking plaquenil can i take tizanidine
plaquenil chemical structure hydroxychloroquine brand is diflucan and plaquenil related how long does it take for plaquenil to kick in
provigil erowid best places to buy provigil online adhd cocktail vyvanse and provigil or modafinil why my doctor won’t prescribe modafinil
zithromax otc azithromycin lowest price azithromycin tablets usp 250 mg used for what does azithromycin cure
ventolin dose medication albuterol does expired albuterol still work which inhaler to use first albuterol or flovent
cialis 10mg achat commander du cialis en france cialis en vente libre en belgique quelle difference entre cialis et levitra
prednisone tab 10mg prednisone in mexico prednisone side effects in dogs why does prednisone make me feel so good
prix boite viagra viagra paypal call of the wild viagra boys quand et comment prendre du viagra
ivermectin roundworms ivermectin 24 mg can you give ivermectin to pregnant goats what breeds should not get heartworm preventative wih ivermectin
ivermectin corona virus ivermectin pills ivermectin pour on for dogs where to buy ivermectin shampoo
medicamento cialis cialis pharmacie acheter cialis en pharmacie en espagne cialis 20mg ou viagra 100mg
ipratropium bromide albuterol albuterol for sale canada ventolin inhalers over the counter where can i buy albuterol inhalers
noromectin ivermectin ivermectin 0.1 can humans take ivermectin horse paste how long foes it take for ivermectin to work?
ivermectin and praziquantel buy ivermectin uk ivermectin 1 percent for dogs when to giveadog ivermectin
plaquenil manufacturer coupon plaquenil cost in canada hydroxychloroquine/ plaquenil for tmj how long does it take for plaquenil to work if you haven’t taken it foramonth
dose of ivermectin ivermectin usa price heartgard plus ivermectin and pyrantel how to store ivermectin 1%
buy cialis without how do i get viagra in australia cheapest way to buy cialis what can i use instead of viagra
plaquenil for coronavirus plaquenil 800 mg can plaquenil cause joint pain how long does it take to get plaquenil out of body for those over 60
natural viagra recipe real life experiences viagra what is cialis super active how much viagra shouldawoman take
medicament cialis prix acheter cialis belgique sans ordonnance acheter du cialis en allemagne le cialis agit au bout de combien de temps
viagra recensioni comprar viagra acquisto viagra on line sicuro viagra come ottenerlo
plaquenil and antacids hydroxychloroquine 0.5 icd-10 code for plaquenil screening how long before plaquenil is out of your system
buy cialis australia cialis 5mg best price australia cialis dosage for recreational use what is levitra for
acquista viagra viagra senza prescrizione prezzo del viagra in italia quando costa il viagra
cialis orosolubile vendita cialis online italia cialis da5mg non funziona quante ore prima bisogna prendere il cialis
recherche viagra viagra pas cher france effet du viagra sur les hommes viagra 100 ou 50
acheter cialis commander cialis 20mg cialis 20 mg ou viagra cialis pourquoi
prescription viagra viagra gГ©nГ©rique pas cher quels sont les effets du viagra viagra quelle dose
cardioaspirina come viagra viagra compresse sono cardiopatico posso prendere il viagra viagra generico dove acquistare
ivermectin solubility ivermectin9mg tablet ivermectin .08 dosage for dogs merck ceo who donated ivermectin